Page 646 – Thutastar
ငါလိုလူမျိုးမှ စာမေးပွဲမကျရင် ဘယ်လိုလူမျိုးမှ စာမေးပွဲကျတော့မှာ မဟုတ်
Comments Off on ငါလိုလူမျိုးမှ စာမေးပွဲမကျရင် ဘယ်လိုလူမျိုးမှ စာမေးပွဲကျတော့မှာ မဟုတ်
ငါလိုလူမျိုးမှ စာမေးပွဲမကျရင် ဘယ်လိုလူမျိုးမှ စာမေးပွဲကျတော့မှာ မဟုတ် #သာအေးသို့ပေးစာ. . . သာအေးရေ. . . နွေဦးလည်းရောက်လို့ စိတ်ရူးလည်းပေါက်နေပြီ. . .။ စာကျက်ဖို့ အာရုံစိုက်ရတဲ့ စိတ်ကလေ ထနောင်းပင်အို ထက်ကနေ လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးတွန်ကြူးနေတဲ့ ဥသြသံဆီရောက်သွားလိုက်. . . ဇော်ဝမ်းရဲ့ သင်္ကြန် သီချင်းတွေကြားစီးမျောသွားလိုက်နဲ့ တော်တော်ဖမ်းဆုပ်ရခတ်နေတယ်. . .။ ငါ စာကျက်ဖို့ဆိုပြီး ငါ့စိတ်ကို ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ မန္တလေးမြို့ကြီးပတ်ပြီး လိုက်ရှာမိပါရဲ့. . .။ ၈၄ လမ်းပေါ်က စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာများ ငါ့ရဲ့စာကျက်ချင်စိတ်ကလေးများရှိနေမလားဆိုပြီး ဝင်ရှာမိပါတယ်. . .။ မြသန်းတင့်ရဲ့ ဓားတောင်ကို ကျော်၍မီးပင်လယ်ကိုဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုစာအုပ်ကြီးက ဆွဲဆောင်နေလို့် ငါ့မှာမနည်း ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြေးလာခဲ့ရတယ်. . .။ သင်္ကြန်
သင်ဟာ လိင်စိတ်အထွတ်အထိပ်ရောက်ပြီး အချိန်ဘယ်လောက်အကြာတွင် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်စနိုင်သလဲ
Comments Off on သင်ဟာ လိင်စိတ်အထွတ်အထိပ်ရောက်ပြီး အချိန်ဘယ်လောက်အကြာတွင် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်စနိုင်သလဲ
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများတွင် ဘယ်သူက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပိုစိတ်ဝင်စားမှု ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြောရခက်ပါတယ်။ လိင်တစ်ခါဆက်ဆံတိုင်းမှာ အကြိမ်များစွာ ဆန္ဒပြီးမြောက်နိုင်တယ်လို့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိသူ အမျိုးသမီး အချို့ကပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ အချို့အမျိုးသားများကတော့ သူတို့ရဲ့ လိင်တံ ထောင်မတ်မှု ဆုံးရှုံးသွားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ စိတ်ဆန္ဒ ပြီးမြောက်နိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အခြားသူများကတော့ လိင်စိတ်အထွတ်အထိပ် နောက်ထပ် မဖြစ်ခင် အချိန်စောင့်ရတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ လိင်ဆန္ဒပြီးမြောက်သွားတဲ့နောက် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတွေ နောက် တစ်ကြိမ်ပြန်စဖို့ အချိန်ယူရသော ကာလ။ အမျိုးသားများဟာ ဒီ ပြန်စောင့်ရသော အချိန်ကာလသည် အနည်းဆုံး မိနစ် ၃၀ မှ ၄၀ ကြား လိုအပ်တယ်လို့ လူအများက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ သို့သော် လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ ၎င်းနှင့်
Comments Off on အလစ်အငိုက် တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရသော တောင်တွင်းကြီးမြို့
တောင်တွင်းကြီး (Myanmar Now) – မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့တွင် စက်တင်ဘာ ၁ဝ ရက်နေ့ညက မူစလင်တို့၏ နေအိမ်၊ ဆိုင်ခန်းတို့ကို မည်သည့်နေရာက ထွက်ပေါ်လာမှန်း မသိရသည့် လူအုပ်ကြီးက ဝင်ရောက် ဖျက်ဆီးကြရာ ထိုမြို့တွင် အနှစ် ၂ဝ ကျော် နေထိုင်လာသူ ကိုမြင့်စိုးလေးအတွက် ကမ္ဘာပျက်သလို ဖြစ်သွားသည်။ မြို့တွင်း လှည့်လည်နေသော လူအုပ်ကြီးက သူ၏ ဖုန်းနှင့်ကုန်မာဆိုင်ရှေ့ရောက်လာပြီး လေးကြိမ်တိုင် ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးသည်ကိုလည်း ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုညက ဆိုင်ပိတ်ရန် ပြင်ဆင်နေစဉ် နှမဖြစ်သူက အနားမှအိမ်တစ်လုံး ခဲဖြင့်ထုခံနေရပြီဟု ဖုန်းလှမ်းဆက်သည်။ ထိုအချိန်တွင် မျက်နှာအုပ်ပြီး ရုပ်ဖျက်ထားသူ ၃ဝ ကျော်က အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့၏ ဆိုင်ကြီးဆိုင်ငယ်များကို ဖျက်ဆီးနေသဖြင့် သူလည်း ဆိုင်တံခါးသော့ခတ်၊ မီးအမှောင်ချကာ တိတ်တိတ်လေး နေလိုက်ရသည်ဟု ကိုစိုးမြင့်လေးက
#အညတရ ဆရာမလေးမှ နိုဗဲလ်ဆုရှင် မာလာလာထံသို့ ပေးစာ
Comments Off on #အညတရ ဆရာမလေးမှ နိုဗဲလ်ဆုရှင် မာလာလာထံသို့ ပေးစာ
#အညတရ ဆရာမလေးမှ နိုဗဲလ်ဆုရှင် မာလာလာထံသို့ ပေးစာ အသက်ငယ်ဆုံး နိုဗဲ ( လ် )ဆုရှင် မာလာလာယူဆွန်ဇိုင်း (ဗ် )ကပြောတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုက ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်တိုင် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာအသိအမှတ်ပြုမှ ဖြစ်မယ် ။အသိအမှတ်လည်းပြုသင့်တယ်။ အတူနေထိုင်တာချင်းအတူတူ မြန်မာ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်တွေဘက်က လူသားချင်းမစာနာဘဲ မတရား နှိပ်ကွပ်နေသတဲ့ တရားရေး လူ့အခွင့်အရေးကို မေ့ထားကြသတဲ့။ ဒီမှာ …မာလာလာ ကျွန်မကမြေဖြူကိုင်ပြီး အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ် တွေကိုပျိုးထောင်ပေးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အညတရဆရာမလေးတစ်ယောက်ပါရှင်။ လက်သည်းဆိတ်ရင် လက်ထိပ်နာတတ်သူမို့ ဒီစာလေးရေးလိုက်ရတာပါ။ မာလာလာဆိုတာ အဲ့ဒီအစွန်းရောက်တွေ အကြမ်းဖက်ခံရပြီး အသက်ပြင်းတာမို့ သေကံမရောက် သက်မပျောက်ခဲ့တာပါ။ မိန်းကလေးလည်းဖြစ်ပြန် အသက်ကလည်း ငယ်ရွယ်တော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ကရုဏာသက် ခဲ့ကြတာပေါ့။ ဒီအထဲမှာမှ မြန်မာနိုင်ငံသူ/ သားများ
Comments Off on မြန်မာ့သမိုင်းထဲက ဖိနပ်တိုက်ပွဲ
ဖိနပ်တိုက်ပွဲ ဟု ဆိုသောကြောင့် ဖိနပ်တွေကို တိုက်သည့်ပွဲမဟုတ်သလို အပြန်အလှန်ထိုးသတ်ရသော တိုက်ပွဲလည်း မဟုတ်ကြောင်းပါ။ ဘုရားကျောင်းကန်များတွင် ဖိနပ်စီးကြသော ဥရောပလူမျိုးများကို မြန်မာလူမျိုးများ အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသော ပြဿနာကြီးတစ်ရပ်သာ ဖြစ်သည်။ ကိုလိုနီခေတ်အတွင်းက အင်္ဂလိပ်လူမျိုးအပါအဝင် အနောက်ဥရောပသားများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ ကျောင်းကန် ဘုရားများတွင် ဖိနပ်စီးကာ ဝင်ထွက်သွားလာလျှက်ရှိသည်။ ထိုအပြုအမှုကို သက်ဆိုင်ရာဂေါပကများက မကန့်ကွက်ရဲကြ။ မကြိုက်လှသော်လည်း ကြောက်ရွံ့သဖြင့် ငြိမ်ခံနေသလိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်မှ ဝတ်လုံတော်ဘွဲ့ရကာ ပြန်လာသော ဦးသိမ်းမောင်သည် ပြည်မြို့ရွှေဆံတော်ဘုရားကို သွားရာမှ ဘုရားအဝင်အဝတွင် ရေးထားသော “ဗြိတိသျှလူမျိုးများနှင့် ဥရောပတိုက်သားများမှအပ မည်သူမျှဖိနပ်မစီးရ”ဟူသော စာတန်းကို မြင်ကာအတော်ခံပြင်းသွားသည်။ အင်္ဂလိပ်နှင့် နိုင်ငံခြားသားများကို တရားဝင်ဖိနပ်စီးခွင့် ပြုထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ဦးသိမ်းမောင်သည် ဂေါပကအဖွဲ့အား အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြရာ လက်ခံပြီး “မည်သူမျှ ဖိနပ်မစီးရ”
Comments Off on ဘယ်သူ့နောက်ကို လိုက်မလဲ
ဖြောင့်သူနှင့်ကောက်သူ ဘယ်သူ့နောက်ကို လိုက်မလဲ ရှေ့ဆောင်နွားလားဥသဘဟာ ရှေ့ဆုံးကနေ ကွေ့ကောက်သွားလျှင် နောက်က နွားတစ်သိုက်ကလည်း ကွေ့ကောက် လိုက်တယ်။ ဒီလိုပါပဲ အထွတ်အမြတ်ခေါင်းဆောင်လို့ သမုတ်ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်မင်းက မတရားတဲ့အကျင့်ကို ကျင့်နေရင် တိုင်းသူပြည် သားတို့မှာ ဆိုဖွယ်မရှိ။ ခေါင်းဆောင်တွေ မတရားတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေရင် တိုင်းသူပြည်သားတွေ ဆင်းဆင်း ရဲရဲနေရတယ်။ ရှေ့ဆောင်နွားလားဥသဘက ရှေ့မှနေ ဖြောင့်ဖြောင့်သွားရင် နောက်ကနွားများလည်း ဖြောင့်ဖြောင့်လိုက်ကြတယ်။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူမင်းက တရားနှင့်အညီ မျှတစွာကျင့်သုံးရင် တိုင်းသူပြည်သားတို့မှာ ဆိုဖွယ်မရှိ။ တရားကို လိုက်နာ ကျင့်သုံး ကြမည်အမှန်။ ခေါင်းဆောင်များက တရားနှင့်အညီ ကျင့်လျှင် တိုင်းပြည် ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်။ ချိုမြိန်တဲ့အရသာရှိတဲ့ သရက်သီးကို မမှည့်ခင် အစိမ်းလိုက်ခူးရင် သရက်သီးအရသာလည်းပျက်တယ်။ သရက်မျိုးစေ့လည်း ပျက်စီးတယ်။ ဒီလိုပါပဲ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူများဟာ တိုင်းသူပြည်သားတွေကို အဂတိလိုက်စား မိုက်မိုက်မှားမှား
ထိုင်းဘုရင်​စစ်​တပ်​ရဲ့ ​လေတပ်​ဦးစီးမှူးဖြစ်​လာတဲ့ ​ တောင်​​ပေါ်က ကရင်လူမျိူး
Comments Off on ထိုင်းဘုရင်​စစ်​တပ်​ရဲ့ ​လေတပ်​ဦးစီးမှူးဖြစ်​လာတဲ့ ​ တောင်​​ပေါ်က ကရင်လူမျိူး
BBC ကြောင့် ဦးဝီရသူ သင်္ကန်းခြုံလျှက် ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စ ဦးဝီရသူ ဗွီဒီယိုဖိုင်နဲ့ ရှင်းပြီး..။
Comments Off on BBC ကြောင့် ဦးဝီရသူ သင်္ကန်းခြုံလျှက် ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စ ဦးဝီရသူ ဗွီဒီယိုဖိုင်နဲ့ ရှင်းပြီး..။
“BBCကို ချီးထက်ရွံတယ်” 12.9.2017 ရက်နေ့ကပါ။ BBC သတင်းထောက်က သဟာယကျောင်းရှေ့ လမ်းမကြီးပေါ်မှ ဗီဒီယိုကင်မရာများနှင့်ချိန်ပြီး အသင့်စောင့်နေပါတယ်။ မနက် ၁၁း၀၀ နာရီထိုးချိန် စာရေးသူ ဆွမ်းစားကျောင်းသွားမည့်လမ်းမှာ စောင့်ပြီးရိုက်ကူးဖို့ အဆင်သင့်အနေအထား ပြင်ထားကြတာပါ။ အဲဒီနေ့က မိုးလေးတဖွဲဖွဲလည်း ကျနေပါတယ်။ စာရေးသူက အဗျူးမခံချင်တာနဲ့ သူတို့ကမ်းလှမ်းတာကို ပယ်ထားပြီးသားပါ။ သူတို့နဲ့ဗျူးရင်လည်း အရှိအတိုင်းလွှင့်မှာမဟုတ်၊ ပြည်သူနဲ့ရန်တိုက်ပေးလို့ရမည့်စကားလုံးဆိုရင် လွှင့်မယ်၊ အမှားပါတဲ့စကားလုံးဆိုရင်လွှင့်မယ် ဒါမျိုးတွေရိုးနေပြီဆိုတော့ BBC ကမ်းလှမ်းတာကို လက်မခံလိုက်ပါဘူး။ စာရေးသူက လက်မခံဘူးဆိုတော့ အဖွဲ့နှင့်ပဲဗျူးတော့မယ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဖွဲ့အနေနှင့် လက်ခံတာကတော့ ကောင်းပါတယ်။ စာရေးသူကို ပစ်မှတ်ထားသလိုမျိုး မဖြစ်နိုင်တာမို့ အဖွဲ့အနေနှင့် လက်ခံလိုက်ကြပါတယ်။ အဖွဲ့ဆီပဲသွားဗျူးမယ်ထင်နေတာ၊ ဆွမ်းစားသွားရာ လမ်းမှာ စောင့်နေတာ မသိလိုက်ဘူး။ ကံကောင်းချင်တော့ ခါတိုင်းစားနေကြ ဆွမ်းစားကျောင်းမှာမဟုတ်ဘဲ အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့ လေးထပ်ကျောင်းကြီးမှာ
Prev 1 … 645 646 647 … 663 Next